14 Sep, 2018 - 00:09	 2018-09-13T07:47:49+00:00 2018-09-14T00:04:37+00:00 0 Views
NDIRI murume ane makore 36, ndinotsvagawo mukadzi ane makore 25 zvichikwira ane mwana kana asina. Anonamata chechi dzechipositori kana Zion ngaandibate pa0716 262 835.
Ndinotenda veTishamwaridzane, ndiri murume ane makore 30 nevana 2. Ndinodawo mudzimai ane makore 19 kusvika 25 ari siriyasi. Ndinobatika pa0778 468 388.
Makadii veKwayedza? Ndinotsvagawo murume anoda zvemba. Ndine makore 25 nemwana 1. Kana paine andida anondibata pa0775 868 156 chero nguva, ndiri kuMarondera.
Ndiri murume ane makore 42, ndinotsvaka mukadzi ane makore 20 – 45. Anondida ndibate pa0778 426 727.
Ndiri mukadzi ane makore 30 nevana vaviri, HIV positive uye ndoda murume ane makore 33 kusvika 38 anoshanda. Anoda zvemba ngaandibate pa0783 819 280.
Ini ndine makore 44, ndiri kutsvaga mudzimai anoda kumisa musha neni asi ngaave ari pamushonga seni. Nhare yangu 0716 882 333, chero nguva.
Makadini? Ndinokumbira vose vaifona pa0785 039 642 vachirega havo nekuti ndakamuwana wandaida, ndinokutendai nechirongwa cheTishamwaridzane.
Makadii paTishamwaridzane? Ndiri kutsvagawo mukadzi wekuroora ane makore 35 zvichidzika, ngaave mutsvuku murefu, mutete kana ane muviri uri pakati nepakati. Ini ndine makore 45 nevana 2. Andifarira ngaandibate pa0714 209 175.
Makadini vekwayedza? ndiri murume ane makore 46 nevana vaviri ndinotsvaga mukadzi wekuroora ari negative sezvandiriwo. Nhamba dzenhare 0717 673 677.
Ndiri mukomana ane makore 20, ndinotsvagawo musikana ane makore 18 kusvika 19 anoda zverudo. Ndiri muHarare uye ndinoshanda. Andida ngaandibate pa0735 434 537.
Ndiri mudzimai ane makore 31 nevana 2, ndinodawo murume ane makore 40-50 anodawo zvemba anonamata asina mudzimai akagezeka. Ari pachokwadi anondibata pa0776 885 874.
Makadii? Ndinotsvakawo mukomana ane makore 20 kusvika 25 ari pamushonga seni. Ari serious nekuroora ngaandibate pa0784 008 115.
Makadii zvenyu? Ndiri mukoma ane makore 18, ndotsvagawo musikana akanaka. Andida ngaandibate apa 0779 421 466, ndatenda hangu.
Makadii henyu veKwayedza? Ini ndiri mudzimai ane makore 25 ekuberekwa uye ndiri kutsvakawo murume ane makore 29 kusvika 36. Ndine vana 2, ndinoda murume anosevenza anomukira kubasa. Ndinogara kuKaroi, handisi pamushonga. Nhare yangu 0712 118 841.
Makadii? Ndiri murume ane makore 26, ndotsvagawo mukadzi ari kuda zvekuwanikwa ane makore 20 kusvika 24 ane mwana wakewo mumwe chete. Ndoda anomatawo asi kwete anopinda postori. Ndinoshanda semurairidzi muHarare, vanopoda-poda nevanozora zvekutsvukisa kwete. Ndatenda hangu, nhare yangu 0715 782 955.
Ndiri murume ane makore 39 nemwana 1, ndiri kutsvagawo mukadzi wekushamwaridzana naye. Ndiri muHarare, nhare yangu 0773 500 746.
Makadii veKwayedza? Ndiri mukadzi ane mwana 1 uye ndinotsvagawo murume ari pachokwadi nemba. Ndiri muHarare saka ndodawo ari muHarare. Anoda ngaandibate pa0772 569 954.
Makadii veKwayedza? Ndiri kutsvagawo single mother yekufambidzana nayo inoda munhu kwete vanoda mari nekuti vanoda mari ndaneta navo. Ada ngaandibate pa0774 499 215.
Makadini veKwayedza? Ndiri mukomana ane makore 28, ndinodawo musikana anoda zvemba. Nhamba dzangu 0772 507 640.
Makadii veTishamwaridzane? Ndiri murume ane makore 35 ndotsvagawo mukadzi ane vana 2 wekuroora. Ada ngaandibate pa0717 757 012. Ndatenda hangu nekushambadza yangu tsamba.
Makadii vanhu vaShe? Ndinofara nechirongwa chino, ndiri mukomana ane makore 23, mupfupi, mushava uye ndoda musikana akanaka anotya Mwari. Ngaave mutsvuku akati simbei anogona kuimba nekuti ndiri kuda kuita zvekuimba gospel . Asingarwe seni achigara pedyo neHarare ngaandibate pa0717 665 854.
Zviri sei kwamuri uko? Ndiri murume, makore angu 36. Shamwarikadzi munaku kunge ngirozi, mutano chose ari negative, anenge tsime remazirudo kunge chisipite chisingapwe mvura inotonhorera kunwa, ndiye wandiri kuda. Ngaabva atondibata pa0712 774 011.
Makadii? Ndiri mukomana ane makore 22, ndinotsvaga musikana ane makore 18 – 20. Ndobatika pa0718 485 255.
Makadii henyu? Ndiri murume ane makore 40, ndinotsvagawo mukadzi ane mwana mumwe. Anoda ngaandibate pa0772 208 068.
Ndiri murume ane makore 29, ndotsvagawo musikana kana mukadzi wekuroora. Ndogara muHarare, andida ngaandibate pa0715 928 246.
Ndiri mukadzi ane makore 38, ndodawo murume ane makore 45 kusvika 60 asi varume vevanhu kwete. Ndobatika apa 0776 168 417.
Makadii veKwayedza? Ndiri murume ane makore 36 ekuberekwa ndinotsvagawo mudzimai wekuwana ane vana vakewo 2 zvichidzika uye ane makore ari pasi pe33. Ndinoshanda zvangu uye ndine munda kumaresettlements nevana 4. Ngaavewo ane chimiro, chiso nemoyo wakanaka. Nhamba dzangu 0717 494 515.
Ndiri mukadzi ane makore 45, ndoda murume ane makore 45 zvichikwira. Ari pachokwadi ngaandibate pa0784 135 793.
Ndiri murume ane makore 39, HIV negative uye ndotsvaga mukadzi ari pachokwadi akazvipira kutorwa ropa. Ave kuda zvemusha ngaandibate pa0779 079 899.
Makadii veKwayedza? Ndine makore 26 nemwana 1 uye ndiri HIV negative. Ndoda murume ari pachokwadi asina chirwere, andida ngaafone pa0772 388 091.
Ndiri mudzimai ane makore 27 nevana 2, ndiri kutsvakawo murume ari pachokwadi anoda kuroora ane mazirudo. Ndinobatika pa0776 619 472.
Makadii veKwayedza? Ndiri murume ane makore 35 nemwana 1 uye ndiri kutsvagawo mukadzi ane mwana 1 anoda zvemba. Ndiri HIV negative, nhare yangu 0718 075 826.
Makadii? Ini ndiri musikana ane makore 25, ndinotsvagawo mukomana wekushamwaridzana naye. Anoda anondiwana pa0776 352 701.
Makadii? Ndine makore 24, ndotsvagawo mukomana ane makore 22 – 30. Nhare yangu 0784 583 483.
Ndiri mukomana ane makore 25 ndinodawo musikana ane makore 25 – 28 anonzwisisa. Andida anondibata pa0771 230 987.
Makadiiko veKwayedza? Ndiri mudzimai ane makore 35 nevana 2, ndiri pamushonga uye ndotsvagawo murume ari zvandiri. Anoda zvemba ngaandibate pa0772 258 680.
Makadii? Ndotsvagawo murume ane rudo netsitsi, ndine makore 39 nevana 2. Ngaave ari pamushonga asingaratidzike seni. Ndobatika pa0775 203 579.
Ndinotsvagawo mukadzi wekufambidzana naye. Ndine makore 31, ndinodawo anoshanda nekuti ini ndinoshandawo. Andifarira ngaandibate pa0777 633 100.
Makadii veKwayedza? Ndine makore 29, ndinotsvakawo mukadzi ane makore 30 – 45 ane mari. Ndoda wekugara naye tichidanana, ndinobatika pa0778 884 641.
Makadini henyu? Ndiri murume ane makore 37, ndotsvagawo mukadzi wokuroora ane makore 23 kusvika 32 ari pamushonga. Anoda ngaandibate pa0784 863 124.
Mufaro kwamuri veTishamwaridzane. Ndine makore 54 nevana 2 uye ndiri HIV negative. Ndiri kudawo mudzimai wekuroora anoda kuita vana 2. Nhare yangu 0776 818 686.
Makadii veTishamwaridzane? Ndinotsvagawo musikana wekuroora ari pachokwadi ane makore 20 zvichidzika asiri pamushonga. Ini ndine makore 23, anoda ngaandibate pa0771 593 265.
Pamusoroi veKwayedza, ndiri murume ane makore 44 okuberekwa ndotsvagawo mukadzi ane rudo. Ndine vana vashanu, andifarira ngaafone pa0778 221 244.
Makadii ? Ini ndiri mukadzi ane makore 28 nemwana 1, ndinotsvagawo murume asina mukadzi ane vana vake 1 kana 2 asiri pamushonga. Ndobatika pa0778 362 928.